Amaro laga soo saaray Amniga degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan – Banaadir Times
By banaadir 4th January 2021 75 No comment
Maalmihii la soo dhaafay degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan waxaa laga dareemayay xiisad u dhaxeysay Ciidamada Booliska degmada & Maleeshiyaad laga qaaday isbaaro u taalay duleedka degmadaas, hayeeshee la sheegay in xal laga gaaray.
Taliska Booliska degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan ayaa soo saaray Amaro la xiriira dhanka amniga si looga feejignaado falal amni darro oo ka dhaca Gudaha iyo daafaha degmada Matabaan.
Taliyaha Booliska degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan Cabdifitaax Maxamed Jaamac fooneeye ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin dad hub si sharci darro ah ugu dhex-wata Magalada.
Waxaa uu sheegay in laamaha Amniga oo kaashana Bulshada degmada Matabaan inay ka hortagayaan maleeshiyaadka mararka qaar hubka ku dhex qaata Magaalada, isla markaana hubkaas ay kala wareegayaan.
Maalmo ka hor ayaa dagaal kooban oo ka dhacay degmada Matabaan waxa Ciidamo Boolis ah oo ka yimid dhinaca degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ay si awood ah ugala wareegeen maleeshiyaad Isbaaro dhigtay duleedka degmadaas, kuwaas oo gaadiidka lacag farabadan ka qaadi jiray.
Dibadbax looga soo horjeedo dilka Muwaadin Soomaaliyeed oo markale ka dhacay Mareykanka
By banaadir 8th April 2021